Digniin Machadka Al-Furqaan Laascaanood iyo Jaamacdda Nugaal. – KHAATUMO NEWS
Digniin Machadka Al-Furqaan Laascaanood iyo Jaamacdda Nugaal.
Magaalada Laascaanood caasimada Gobolada SSC islamarkaana Gacanta ugu jirta haatan Mudo 12 Sano Taliska Beesha Isaaq ee somaliland ayaa mudooyinkan waxaa soo baxaya In Caado Laga dhigto Dhaqamo aan Hore Gobolka Uga jiri jirin.
Goobaha Waxbarashada laascaanood ee Bulshada laascaanood Ubadkooda u geestan Inay wax ugu bartan ayaa isku badalay Goobo Lagu Xayaysiiiyo Horgalada Ushaqeeya maamulka Isaaq ee SNM.
Goobaha ugu daran ee aad Bulshadu indhaha ugu hayaan waxaa kamid ah Machadka Alfurqaan oo Xaflad kasta oo ay dhigtan Miiska hore soo dhiga Shan Horgal oo Dhiiga umada Ku jaqaya laascaanood.
Sidoo kale Jaamacdda Nugaal oo Iyana Hada Xadhgaha goosatay ayaa iyana sidaas oo kale shan horgal Soo Dhigta Miiska hore.
Su aasha is waydiinta leh ayaa ah Ubadka loo keenay Al-Furqaan iyo Nugaal in ay wax kabartan Miyay maamulka isaaq iyo Horgaladu ka bixiyaan Biil miyay siiyan wax Dhaqaallo ah,waa maxay Sababta loogu xayaysiinaya horgalada Gobahaasi.?
Saraakiisha ciidanka Khaatumo iyo Masuuliyiinta Dib u xoreenta Khaatumo ayaa si adag uga digay In Caado laga dhigto Xayaysiiska Horgalada.
Madaxda Dib uxoreenta Khaatumo waxay ka digayan in Ay Arkan Ubadkii ay u dagaalamaayen oo horgal isku sawiraayo laguna Raali galinaayo Muuse Biixi.
Ugu Danbayn Madaxda Dib u xoreenta SSC waxay si cad u sheegen in Goob kasta oo marti galisa Maamulka isaaq iyo waxa u shaqeeya in ay Lamid noqon Doonto Goobaha Boolsika Xeryaha ciidanka SNm iyo Gobaha jabhda u ah Badhtilmaadeedka.
Nagala Soo Xidhiidh Emailka khaatumooffice44@gmail.com
Previous Post: Deg Deg::Madaxweyne Farmaajo Oo Dil Ka Badbaaday
Next Post: Malaayiin Muslimiin ah oo maanta taagan banka Carafo